मोबाइल धेरै चलाउनुहुन्छ ? हुनसक्छ यस्तो खतरा - Everest Dainik - News from Nepal
मोबाइल धेरै चलाउनुहुन्छ ? हुनसक्छ यस्तो खतरा
काठमाडौं । मोबाइलको प्रयोगले सुविधासँगै समस्या पनि निम्त्याएको छ । मोबाइल सेटबाट निस्कने रेडिएसनले स्वास्थ्यलाई असर पुर्‍याइरहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ । यस्तो असरबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कैयौं अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । तर, स्पष्ट जवाफ अझैं आएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस कसरी हेर्ने स्मार्टफोनमा वाइफाइ पासवर्ड ?
याे पनि पढ्नुस टेलिफोनमा कुराकानी गर्न मात्रै वार्षिक ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च
रेडियो फ्रिक्वेन्सीले सामान्यतया फोन कल आउँदा बढी असर गर्ने भएकाले मोबाइल सकेसम्म टाउकोभन्दा टाढा राख्नुपर्दछ । लाउड स्पिकर अथवा इयरफोनको प्रयोगद्वारा पनि हामी रेडिएसनको असरबाट बच्न सक्छौं । नयाँ पत्रिकाबाट
ट्याग्स: cell phone, mobile phone